यस्ता टिप्स अपनाउनुस् तपाईलाई बनाउनेछ रातारात धनी – List Khabar
Home / रोचक / यस्ता टिप्स अपनाउनुस् तपाईलाई बनाउनेछ रातारात धनी
यस्ता टिप्स अपनाउनुस् तपाईलाई बनाउनेछ रातारात धनी
admin4weeks ago रोचक Leaveacomment 57 Views
काठमाडौं । पैसा मानव जीव नका लागि नभई नहुने कुरा हो । पैसाकै कारण मानिसले स म्बन्ध बना उछ वि र्गा पनि । पैसाकै लागि संसारमा के के सम्म भएका हुन्छन् । पैसा भएको मानिसको समाजमा इज्जत मान प्रतिष्ठा हुन्छ अनि संसारमा सबैको चाहना हुन्छ कसरी धेरै पैसा कमाउने । अझ हाम्रो समाजमा त पैसा कमाउन सकेन भने उसलाई असफलको संज्ञा दिइन्छ ।
त्यसैले हरेकले पैसा कमाउने जुक्ति खोजिरहका हुन्छन् । केही यस्ता उपाय छन् जसले तपाईलाई पैसा कमाउन मद्दत गर्छ ।
भनिन्छ सपना नदेखी कुनै पनि काम पुरा हुँदैन । सपना पुरा गर्नका लागि महत्वकां क्षी बन्नुपर्छ । अनि त्यसमा तत्तचित्त भएर लाग्न सके कुनैपनि काम सफल हुन्छ । त्यसैले तपाईं पनि पैसा कमाउन चाहनु हुन्छ भने आजैबाट सपना देख्न सुरु गर्नुस् । जसले सपना देख्छ जो महत्वकांक्षी बन्छ उसले मात्रै समाजमा मान, प्रतिष्ठा र पैसासमेत कमाउन सक्छ ।
सबै ब्यक्तिमा केही न केही क्षमता हुन्छ । फरक यति हो कसैले आफ्नो क्षमता पहिचान गर्न सक्छन् भने कसैले सक्दैनन् । शुरुमा तपाईंले आफुलाई चिन्नु जरुरी छ । त्यसैले तपाईं पहिले आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्नुहोस् । र त्यसैअनुसार काम गर्नुहोस्, त्यसले तपाईंलाई सफलताको शिखरमा पुग्न सहयोग गर्छ । तपार्इले मनदेखि नै गरेको काम तथा क्षमताको पहिचानले मात्रै तपाई‌ले खोजेको सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ ।
काम गर्दा सानातिना अड्चन आउन सक्छन् । तर त्यसवाट हरेस नखानुस् । यो कुरा बुझ्नुस् कि बि ना परिश्रम सफल हुन सहज छैन । त्यसैले मेहनत गर्नुहोस्, निरन्तर परिश्रम गर्नुहोस् । एक दिन तपाईं सफल बन्नु हुनेछ । र पैसा आफैं तपाईंको पछि दौडनेछ ।
कुनै काम मनमा कल्पनु भन्दा सुरु गरिहाल्नुहोस् । तपाईं चुप लागेर बस्नु भयो भने पैसा कमाउन सक्नुहुन्न । त्यसैले तपाईंले कुनैपनि कामको जोखिम मोल्नै पर्छ । त्यसैले काम सुरु गर्नुहोस् र त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोस् ।
पैसा कमाउनु भनेको बचत पनि हो । आफुले कमाएको पैसा यदि बचत हुँदैन भने त्यसको पनि केही अर्थ छैन । अर्काको देखासिकी गरेर पैसा खर्च नगर्नुस् । पैसा उडाउने खालका साथी छन् भने तिनीहरूको संगत छोडिदिनुस् । तपाईंको पैसामा अरूलाई किन मोज गराउनुहुन्छ रु पैसा बचाउनु पनि पैसा कमाउनु नै हो ।
आफूलाई चाहिने कुरा मात्र किन्नुस् । सामान किन्दा अति आवश्यक बस्तुको लिस्ट बनाउनुहोस् । जे किन्दा पनि अत्यन्त आवश्यक छन् कि छैनन् भनी विचार गरेर मात्र किन्ने गर्नुस् । केही नयाँ कुरा सिक्नुस् । आफूसँग भएका क्षमता तिखार्नुस् । यसरी नयाँ कुरा सिकेपछि तपाईंले पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ ।
आजकल सामाजिक सञ्जालबाट पैसा कमाउन सकिन्छ भ न्ने धेरैलाई थाहा छैन । आफ्नै युट्युब च्यानल खोल्नुस् र क्रिएटिभ भिडियो अपलोड गरेर मोनेटाइज गर्नुस् । तपाईं प्रसिद्ध पनि हुनुहुनेछ अनि धनी पनि । घरमै बसीबसी पैसा कमाउने यो उत्तम उपाय हुन सक्छ ।
घरमा भएका पुराना सामान बेचिदिनुस् । जुन सामान प्रयोगमा आउँदैनन् त्यस्ता सामान बेच्दा पैसा पनि हुने, घर पनि सुन्दर देखिने । कमाइभन्दा कम खर्च गर्नुस् । आमदानी अ ठन्नी, खर्चा ? पैयाँ गरेर काम छैन । क्रेडिट कार्डको लत जति छिटो छुट्यो, त्यति राम्रो ।
वर्षैपिच्छे तलब बढ्ला भनेर आ श गर्नुभयो भने तपाईं कहिल्यै धनी हुन सक्नुहुन्न । त्यसैले राम्रो तलब दिने जागिरको खो जी गर्दै अफिस छिटोछिटो बदल्नुस् ।
Previous जागिर खुल्यो @Free Visa कसरी काम पाउने सम्पूर्ण जान”कारी इच्छुक ले Hi लेखी पूरा पढेर शेयर गर्नुहोस
Next BREAKING NEWS:मौसमले दियो खतरनाक संकेत ? यि पाँचवटा प्रदेशका लागि महाशाखाको यस्तो चेतावनी